CPU-X sy CPUFetch: fampiharana mahasoa 2 hanehoana ny mason'ny CPU | Avy amin'ny Linux
CPU-X sy CPUFetch: fampiharana mahasoa 2 hijerena ireo mason'ny CPU
Na noho ny antony ara-teknika (fikarohana na fanamboarana) na noho ny antony te hahafanta-javatra sy fanaingoana (Andro ny Desktops), ho an'ny mpampiasa solosaina mafana fo miaraka amin'ny GNU / Linux, zava-dehibe foana ny hahafahana mahafantatra mora foana ary manara-maso tsara aza ny Soatoavina CPU avy amin'ny solosainao. Ary ho an'ity dia misy ny rindranasa "CPU-X" ary "CPUFetch".
Araka izany, "CPU-X" ary "CPUFetch" dia fampiharana 2 mahaliana sy mahasoa izay manamora fampisehoana sy fanaraha-maso ireo masontsivana CPU amin'ny solosaina rehetra, na amin'ny sary na amin'ny terminal, mamonjy antsika amin'ny fampiasana fampiharana lehibe kokoa toa ny Hardinfo sy Lshw-GTK na mpanara-maso Hardware hafa, na utilities na baiko baiko amin'ny terminal hahafantarana ny antsipirian'ny Hardware toy ny lshw, inxi ary cpuinfo.
Hatramin'izay, ity lahatsoratra ity dia ara-potoana hatolotra fampahafantarana fanampiny amin'ny fampiharana sy baiko voalaza teo aloha ireo fehintsoratra etsy ambony, dia hamela vitsivitsy isika avy eo rohy avy amin'ny lahatsoratra teo aloha hahafahan'izy ireo mizaha azy ireo, rehefa vita ity publication ity:
"HardInfo dia mampiseho antsipiriany momba ny fitaovana ampiasaina, fa tsy toy ny lshw, mampiseho ihany koa zava-misy mahaliana momba ny rafitra miasa, ny tontolon'ny birao, ny fotoana maharitra, ny modely kernel miasa, ny fiteny misy, ny fampahalalana momba ny rafitra rakitra, sns. Raha ny momba ny fampahalalana momba ny fitaovana dia tsy ampy amin'ny antsipiriany io raha oharina amin'ny lshw, saingy noho ny interface tsara kokoa noho izy io no mora ampiasaina kokoa. Toy izany koa, hardinfo dia mamela ny mihazakazaka fitsapana fampisehoana samihafa (benchmarks)." Fitaovana 3 hahafantarana ny fitaovan'ny rafitrao
Fitaovana 3 hahafantarana ny fitaovan'ny rafitrao
Mitady safidy hafa ho an'ny AIDA64 sy Everest amin'ny Linux?
inxi: script hahitanao amin'ny antsipiriany ireo singa enti-miasa ao amin'ny rafitrao
Mandidy hahafantatra ny rafitra (mamantatra ireo fitaovana sy fikirakirana rindrambaiko sasany)
1 CPU-X sy CPUFetch: fampiharana GUI sy CLI hijerena ny mombamomba ny CPU
1.1 Inona ny CPU-X?
1.1.1 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
1.2 Inona ny CPUFetch?
1.2.1 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
CPU-X sy CPUFetch: fampiharana GUI sy CLI hijerena ny mombamomba ny CPU
Inona ny CPU-X?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy ny voalaza app, dia faritana toy ny:
"CPU-X dia rindrambaiko maimaimpoana manangona vaovao momba ny CPU, motherboard ary maro hafa."
Ho fanampin'izay, manome antsipiriany fanampiny toy ny:
CPU-X dia rindrambaiko fanaraha-maso sy fanoratana (mitovy amin'ny CPU-Z ho an'ny Windows), fa kosa CPU-X dia rindrambaiko malalaka sy loharano misokatra natao ho an'ny GNU / Linux sy FreeBSD.
Azo ampiasaina amin'ny maody sary amin'ny fampiasana GTK na amin'ny maody an-tsoratra mampiasa NCurses.
Afaka alaina ao ianao izao 4.2 version, ao amin'ny Endrika ".AppImage", "tar.zg" ary "zip", na amin'ny tranokala ofisialiny na amin'ny tranokala ofisialiny ao GitHub.
Ho an'ny tranga hampiasana anay, hapetrakay amin'ny alàlan'ny Format ".AppImage" hametraka sy hampandeha azy, amin'ny fomba tsotra sy haingana amin'ny antsika Operating System ampiasaina (MilagrOS -> Respin miorina amin'ny MX Linux).
Araka ny aseho amin'ireto pikantsary manaraka ireto:
Inona ny CPUFetch?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub ny voalaza app, dia faritana toy ny:
"CPUFetch dia fitaovana fikarohana tsotra nefa kanto CPU."
Ho fanampin'izay, tsara ny manasongadina momba izany fitaovana tsipika baiko tsotra (CLI) ny manaraka:
Mitovy amin'ny Neofetch izy io, fa mifantoka amin'ny fahazoana sy fampisehoana ny maritrano ny CPU amin'ny Linux, Windows, MacOS ary Android Operating Systems.
Mampiseho ny sary famantarana an'ny mpanamboatra (ohatra, Intel, AMD) miaraka amin'ny fampahalalana CPU fototra, ao anatin'izany ny fampahalalana manan-danja, toy ireto manaraka ireto:
Teknolojia Semiconductor amin'ny nanometers (nm)
Isan'ny cores sy kofehy
Torolàlana hanambatra-Multiply-Add na Fused-Multiply-Add / FMA
Haben'ny cache L1, L2, ary L3
Fampisehoana farany ambony.
Toy izany koa no mety ho amin'izao fotoana izao alaina sy apetraka amin'ny alàlan'ny GIT avy amin'ny kitapom-bolanao GitHub. Ary misy ao amin'ny anao izao 0.94 version.
Ho an'ny tranga azo ampiharina, hapetrakao amin'ny anay koa izany Operating System ampiasaina (MilagrOS -> Respin miorina amin'ny MX Linux) manaraka ireto baiko manaraka ireto:
naoty: Araka ny hitanao izao, CPUFetch Ankoatr'izay izy io dia famenon-javatra tsara indrindra hankalazana ny Zoma Desktop.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «CPU-X y CPUFetch», Fampiharana mahaliana 2 mahasoa izay manamora fampisehoana sy fanaraha-maso ireo masontsivana CPU avy amin'ny solosaina rehetra, na amin'ny sary izany na amin'ny terminal; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CPU-X sy CPUFetch: fampiharana mahasoa 2 hijerena ireo mason'ny CPU
Shopify no mpikambana vaovao ao amin'ny Open Invention Network
GNOME CIRCLE: Tetikasa fampiharana sy tranomboky ho an'ny GNOME